_ [Chevrolet Myanmar](https://www.carsdb.com/my/used/chevrolet)_ က ယင်း၏ Full Size SUV အမျိုးအစားဖြစ်သော Tahoe ကို ပြီးခဲ့သည့် မတ် ၂၄ တွင် မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်သို့ စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။ လမ်းအမျိုးအစားမရွေးမောင်းနှင်နိုင်သည့် ဆိုဒ်ပြည့် SUV အမျိုးအစား (၇) ယောက်စီး Chevrolet Tahoe ကို ပြီးပြည့်စုံလင်သည့် ဒီဇိုင်းသစ်၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ၊ ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ သက်တော့သက်သာရှိစေမည့် features များဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။!(/redline/content/images/2018/03/Tahoe-1024x595.jpg) မြန်မာနိုင်ငံတွင်းတွင်တော့ ယင်းနှင့်ပုံစံ တန်းတူ SUV အမျိုးအစားထဲတွင် _ [Toyota Myanmar](https://www.carsdb.com/my/used/toyota)_ ၏ Toyota Land Cruiser နှင့် _ [Land Rover](https://www.carsdb.com/my/used?q=land%20rover%2A%2A&)_ Velar တို့ရှိပါသည်။ ယင်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်သို့ Tahoe ထက် စော၍မိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များသည့် ကားများလည်းဖြစ်ကြပါသည်။ ယခုအခါတွင် ယင်းတို့နည်းတူ နည်းပညာရော၊ အရည်အသွေးပါမြင့်မားသည့် Tahoe ဈေးကွက်အတွင်းရောက်ရှိသည့်အတွက် ယင်းအကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကားစိတ်ဝင်စားသူများ သိစေရန် အလို့ဌာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။!(/redline/content/images/2018/03/interior-1024x682.jpg) အပြင်ပိုင်းနှင့် အတွင်းပိုင်း
Tahoe ကို အပြင်ပိုင်းဒီဇိုင်းမှာ မာကျောတောင့်တင်းလှပြီး လေခွင်းအားကို အသုံးပြုကာ အကောင်ဆုံး ခွင်းထုတ်နိုင်စေရန် ကားတံခါးနှင့် ရှေ့မျက်နှာစာတွင် လေခွင်းလိုင်းများထည့်တွင်း တပ်ဆင်ထားပါ သည်။ ထို့ကြောင့် အဝေးပြေးလမ်းမပေါ် မောင်းနှင်ရာတွင် မြန်ဆန်ပြီး ဆီစားနှုန်းလည်း သက်သာ ပါသည်။ စက်ဖုံးနှင့်နောက်ဖုန်းကို အလူမီနီယံများဖြင့် တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် ပေါ့ပါးသည့် ကား တစ်စီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဖုံးခလုတ်ကို လက်ဖြင့်ဖွင့်ရန် အခွင့်မသာသည့် အခြေအနေမျိုးတွင် နောက်ဖုံးအောက်နားကို ခြေဖြင့်ဝေ့ယမ်းလိုက်ပါက အလိုအလျောက်ဖွင့်သွားသည့် hand free power lift gate စနစ်ကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။
ပေါ့ပါးကာ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်စနစ်ပါသည့် လက်ကိုင်ခွေ (Telescoping Steering)၊ လက်ကိုင် ဘီးကို အပူပေးစနစ်၊ အနေအထား (၁ဝ)မျိုးအထိ ချိန်ညှိနိုင်သည့် electronic power adjust ထိုင်ခုံများပါဝင်ပါသည်။ Mylink System အသစ်ကို ၈ လက်မ အရွယ်အစားရှိသည့် ရောင်စုံမျက် နှာပြင်မှတဆင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းကို iPhone5နှင့် အထက်မော်ဒယ်များ၊ android ဖုန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ သီချင်းနားထောင်ခြင်းနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ wireless Charging စနစ်လည်းပါဝင်ပြီး ဒုတိယထိုင်ခုံတန်းမှ ခရီးသည်များအတွက် နောက် ဖက်ခန်းတွင် ဖျော်ဖြေရေး tv screen တစ်ခုပါဝင်ကာ blue ray DVD စက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ကြည့်ရှု နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အင်ဂျင်ပါဝင် ၅.၃ လီတာရှိပြီး ရုန်းကန်အားမှာ ၃၈၃ ပေါင်ပေတွင် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု မြင်ကောင်ရေ အား ၃၅၅ ကောင်မျှရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆင့်မြင်တည်ငြိမ်သော အင်ဂျင်စနစ်၊ ပေါ့ပါးကောင်းမွန် သည့် လက်ကိုင်ပိုင်း၊ ဘရိတ်စနစ်၏ စိတ်ချရမှုတို့ကြောင့် ဝန်တင်ဆောင်ခြင်းသာမက ဝန်များကို ဆွဲ နိုင်ပါသည်။ ဝန်တင်ဆောင်ထားချိန်မှာတောင် ကား၏ လှုပ်ရှားသွားလာမှုမှာ တည်ငြိမ်ပြီး အခြားသော SUV များနှင့် မတူသော အတွေ့အကြုံတစ်မျိုးရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ လမ်းကြမ်းပိုင်း စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်စေရန် အလေးထား ဖန်တီးထားပြီး ဆီတိုက်ရိုက်ပေးသွင်းသည့် direct injection စနစ်၊ ဆလင်ဒါများကို ဆီခြွေတာမှုအတွက် လိုအပ်သလို ရပ်နားပေးသော fuel management system၊ လိုအပ်သလို ထိန်းချုပ်ပေးသော valve timing၊ အလိုအလျောက် အဖွင့်အပိတ် လုပ်ပေးနိုင်သည့် active aero shutter တို့က ကား၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေပြီး ရုန်းအားကောင်းရန်နှင့် ဆီစားနှုန်း သက်သာစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
လေးဘီးယက်စနစ်ဖြစ်သည့် Tahoe ၏ ဘရိတ်စနစ်တွင် သာမန်ထက် နှစ်ဆတာရှည်ခံသော duralife brake rotors disc brake များတပ်ဆင်ထားပြီး မတော်တဆဖြစ်နိုင်ချေရှိလာသည့်အခါ ထိုင်ခုံကို တုန်ခါစေသည့် safety alert seat ကဲ့သို့ လုံခြုံရေးအချက်ပြစနစ်များကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ back camera မှာ မြင်ကွင်ကျယ်စနစ်ဖြစ်သည့်အတွက် ကားပါကင်ထိုးရာတွင် ပိုမိုမြင်သာစေမှာဖြစ်ပါသည်။ မောင်းနှင်နေသော ပုံမှန်လမ်းကြောအတွင်းမှ သွေဖယ်ကာ အခြားယာဉ်ကြောသို့ ရောက်သွား လျှင်ဖြစ်စေ၊ အချက်ပြမီးမပြဘဲ လမ်းကြောအတွင်းမှ ထွက်သွားလျှင် အလိုအလျောက်အချက်ပေး သည့် lane keep assist၊ ယာဉ်နှင့်အနီးဆုံး ပေ ၂၃ဝ အတွင်း မြန်နှုန်းမြင့်လာနိုင်သော ကားများကို အသိပေးသည့် side blind zone alert ၊ ကိုယ့်ကားနှင့် အနီးဆုံး ၆၅ ပေအတွင်းရှိ လမ်းကြောင်း၏ အနောက်၊ ဘယ်နှင့်ညာတို့မှ လာနေသော အခြားယာဉ်များကို အသိပေးသည့် rear cross traffic alert၊ ပုံမှန် cruise control ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ကာ လိုအပ်လျှင်လိုအပ်သလို အရှိန်ကို ထိန်းပေးသည့် adaptive control တို့ပါဝင်ပါသည်။ Tahoe တွင် အသက်ကယ်လေအိတ် (၆) လုံး တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ရွေ့လျားမှုခန့်မှန်းစနစ်၊ ဘီ (သို့မဟုတ်) တာယာများ ခိုးယူမှု ဖြစ်လာပါက အသံအချက်ပေးသည့် စနစ် တို့ကိုလည်း တပ်ဆင်ထားပါသည်။
ထိုသို့ အားကောင်းချက်များရှိသည့် Chevrolet Tahoe သည် မြန်မာကားဈေးကွက်ရှိ SUV အမျိုးအစား များအနက် ကားချစ်သူမိဘပြည်သူများ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ ကားအဖြစ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ် သည်။ Tahoe Premier ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆,၉ဝဝဝ ဖြင့် Pacific Alpine Company ၏ Chevrolet Myanmar က ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။